धेरै खाना खाएर अप्ठ्यारो भएको छ यसो गर्नुहोस ! « Himal Post | Online News Revolution
धेरै खाना खाएर अप्ठ्यारो भएको छ यसो गर्नुहोस !
प्रकाशित मिति : २०७३, ६ पुष १८:५८
४ प्रशस्त पानी भएका फलफूल जस्तैः खरभुजा, स्ट्राबेरी, भुइँकटहर निकै प्रभावकारी मानिन्छन् । यी फलफुलको दोहोरो फाइदा हुन्छ । पहिलो त यी फलफुलमा प्रशस्त पानी हुन्छ जसले अघिल्लो रात खाएका पेटका बिकार हटाउन सहयोग गर्छ । दोस्रो यी फलफुलमा प्रशस्त फाइबर हुन्छ, जसले पाचन प्रणालीलाई सहयोग गर्छ । यी फलफूलमा शरिरलाई आवश्यक भिटामिन र खनिज पनि हुन्छन् ।